U-Yukio Mishima, umzekelo woqeqesho kunye nokuguquguquka koonobumba baseJapan | Uncwadi lwangoku
UJuan Ortiz | | I-Biography, Ababhali, Imbali yoncwadi
U-Yukio Mishima wayengumbhali wenoveli, imbongi kunye nombhali wezincoko, ethathwa njengomnye wababhali baseJapan benkulungwane yamashumi amabini. Imisebenzi yakhe idibanisa izithethe zaseJapan kunye ne-modernism, ngaloo ndlela ifezekisa ukubhalwa kweencwadi ngamazwe ngamazwe. Ngo-1968 wonyulwa ukuba aphumelele ibhaso likaNobel kuNcwadi, ngeso sihlandlo ke lowo waphumelela eli wonga wayengumcebisi wakhe:.
Umbhali ibonakaliswe ngoqeqesho lwayo, kunye nokuguquguquka kwemixholo yayo (isini, ukufa, ezopolitiko ...). Kwi-1988, indlu yokupapasha yaseShinchōsha- eyapapasha icandelo elikhulu leencwadi zakhe- yenza iMishima Yukio Prize ngembeko yombhali. Eli bhaso lanikwa iminyaka engama-27 ilandelelana, ushicilelo lokugqibela lango-2014.
1.1 Izifundo zokuqala
1.2 IMfazwe Yehlabathi yesiBini
1.3 Izifundo zobungcali
1.4 Uhlanga loncwadi
1.5 Isithethe sokufa
2 Iincwadi ezigqwesileyo ngumbhali
2.1 Ukuvuma kweMaski (1949)
2.3 IGolden Pavilion (ngo-1956)
2.5 Urhwaphilizo lwengelosi (1971)
U-Yukio Mishima wazalwa ngoJanuwari 14, 1925 eTokyo. Abazali bakhe yayinguShizue kunye noAzusa Hiraoka, owambhaptiza ngegama elithi: Kimitake Hiraoka. Wakhuliswa ngumakhulu wakhe uNatsu, owamsusa kubazali bakhe esemncinci.. Wayengumfazi onzima kakhulu kwaye wayefuna ukumkhulisa phantsi kwemigangatho ephezulu yentlalo.
Ngokoluvo lukaMakhulu wakhe, wangena kwisikolo saseGakushüin, indawo yoluntu oluphezulu kunye nobukhulu baseJapan. UNatsu wayefuna ukuba umzukulwana wakhe abe nobudlelwane obuhle nezihandiba zeli lizwe. Apho wakwazi ukuba lilungu lebhodi labahleli besikolo soncwadi esikolweni. Oku kwamvumela ukuba abhale kwaye apapashe ibali lakhe lokuqala: UHanazakari no Mori (1968), yemagazini eyaziwayo Bungei-Bunka.
IMfazwe Yehlabathi yesiBini
Ngenxa yeengxabano ezixhobileyo Imfazwe yesibini yeHlabathi, uMishima wabizwa ukuba ajoyine uMkhosi wamanzi waseJapan. Ngaphandle kokuba enomzimba obuthathaka, wayehlala egcina umnqweno wokulwela ilizwe lakhe. Kodwa iphupha lakhe lancitshiswa xa wazisa umfanekiso womkhuhlane kuvavanyo lwezonyango, isizathu sokuba ugqirha amenze angafaneleki kuthathelwa ingqalelo ukuba uneempawu zesifo sephepha.
Nangona uMishima wayehlala ekuthanda ukubhala, wayengakwazi ukukusebenzisa ngokukhululekileyo ngexesha lobutsha bakhe.. Kungenxa yokuba wayengowosapho olulondolozayo kwaye utata wakhe wagqiba kwelokuba afunde isidanga saseyunivesithi. Ngesi sizathu wangena kwiYunivesithi yaseTokyo, apho waphumelela kwezomthetho ngo-1957.
UMishima wenza umsebenzi wakhe wobuchule unyaka omnye njengelungu loMphathiswa Wezemali waseJapan. Emva kwelo xesha, waphela edinwe kakhulu, utata wakhe wagqiba kwelokuba angaqhubeki esebenza kuloo ndawo. Emva kwexesha, u-Yukio wazinikela ngokupheleleyo ekubhaleni.
Inoveli yakhe yokuqala yayi UTozoku (Abaphangi, 1948), apho waziwa endle zoncwadi. Abagxeki babemthatha "bethatha inxaxheba kwisizukulwana sesibini sababhali basemva kwemfazwe (1948-1949)". Kunyaka kamva, waqhubeka nokupapasha incwadi yakhe yesibini: Kamen no kokuhaku (Ukuvuma kwemaski, 1949), umsebenzi awathi wazuza impumelelo enkulu kuwo.
Ukusuka apho umbhali uzimisele ukudala iinoveli ezingaphezulu kwama-38, imidlalo eli-18, izincoko ezingama-20 kunye nelibretto. Phakathi kweencwadi zakhe ezibalaseleyo esinokuzibiza ngegama:
Amarhe okutshuza (1954)
IGolden Pavilion (1956)
Umatiloshe ophulukene nobabalo lolwandle (1963)
Ilanga kunye nentsimbi (1967). Isincoko esingabhalwa ngumntu
Itetralogy: Ulwandle lokuchuma
UMishima wasekwa ngo-1968 "uTatenokai" (uluntu olukhuselayo), iqela labucala lezomkhosi elenziwe ngamanani amakhulu abantu abathandanayo abancinci. Nge-25 kaNovemba ka-1972, waqhekeza wayalela uMkhosi waseMpuma woKhuseleko, kunye namajoni ama-3. Apho boyisa umphathi kunye noMishima ngokwakhe baya kwi-balcony ukuya kwenza intetho yokukhangela abalandeli.
Eyona njongo iphambili yayikukuqhuba ubhukuqo-mbuso kunye nokuba umlawuli abuyele emandleni. Nangona kunjalo, eli qela lincinci alikhange lixhaswe ngumkhosi obekhona kwindawo leyo. Ukusilela ukufezekisa injongo yakhe, uMishima wagqiba kwangoko ukwenza isiko lokuzibulala laseJapan elaziwa ngokuba yi-seppuku okanye harakiri; wabuphelisa ke ubomi bakhe.
Iincwadi ezigqwesileyo ngumbhali
Ukuvuma kwemaski (1949)
Inoveli yesibini yombhali, ethathelwa ingqalelo yiMishima efanayo njenge-autobiographical. Amaphepha ayo angama-279 abaliswa ngumntu wokuqala nguKoo-chan (mfutshane ngoKimitake). Iyelenqe lisetelwe eJapan kwaye libonisa ubuntwana, ulutsha kunye nokuba mdala komntu ophambili. Ukongeza, izihloko ezinje zobungqingili kunye neefacade zobuxoki zoluntu lwaseJapan lwelo xesha.
Koo-chan Ukhuliswe ngexesha lobukhosi baseJapan. Yena Ungumntu obhityileyo, omhlophe, okhangeleka egula. Kwangexesha elide kwafuneka ajongane nezakhiwo ezingenakubalwa ukuze aziqhelanise nemigangatho yezentlalo. Wahlala kusapho oluqhutywa ngumakhulu wakhe, owamkhulisa yedwa kwaye wamnika imfundo esemagqabini.
En Kwiminyaka yakhe yeshumi elivisayo, uKoo-chan uqala ukuqaphela umtsalane wakhe kubantu besini esifanayo. Njengoko oku kusenzeka, ukhulisa iingcinga ezininzi zesini ezinxulumene nokufa kunye nokufa. UKoo-chan uzama ukuseka ubudlelwane nomhlobo wakhe uSonoko-ukugcina ukubonakala-kodwa oku akusebenzi. Kumaxesha anzima ke la kuye, njengoko kufuneka azifumanele kwaye azenzele ubuwena.
Yincwadi yenoveli ebekwe kwiminyaka yokugqibela yeMfazwe yesibini yeHlabathi. Ibali lichaza isiganeko esiyinyani esenzeka ngo-1950, xa iKinkaku-ji Golden Pavilion yatshiswa ngomlilo eKyoto. Umlingisi wakhe oyintloko nguMizoguchi, obalisa ibali kumntu wokuqala.
Lo mfana wayeyithanda ubuhle bento ebizwa ngokuba yiGolden Pavilion kwaye wayelangazelela ukuba yinxalenye yeemonki yaseZen eRokuojuji. Incwadi yafumana ibhaso le-Yomiuri ngo-1956, ukongeza, yahlengahlengiswa izihlandlo ezininzi kwi-cinema, Kunye nemidlalo, umculo, umdaniso wangoku kunye ne-opera.
Iyelenqe lisekwe kubomi beMizoguchi, I-WHO umfana uzazi malunga nokuthintitha kwakhe nembonakalo engathandekiyo. Edikwe kukuhlala ehlekiswa, uthatha isigqibo sokuyeka isikolo ukuze alandele ekhondweni likayise, owayeyimonki yamaBuddha. Ngenxa yoku, utata wakhe, ogulayo, ubeka imfundo yakhe kuTayama Dosen, ngaphambi kwendwendwe kunye nomhlobo.
Mizoguchi Uye wadlula kwiminyhadala eyaphawula ubomi bakhe: ukungathembeki kukanina, ukusweleka kukayise nokwaliwa kothando (Uiko). Ekhuthazwa yimeko yakhe, lo mfana wangena kwiRokuojuji monastery. Ngelixa wayelapho, uyazikhathaza ngokucinga malunga nokuqhushumisa okunokwenzeka, okuya kutshabalalisa iGolden Pavilion, inyani engenzekiyo. Isaphazamisekile, iMizoguchi iya kwenza isenzo esingalindelekanga.
I-Golden Pavilion ...
Ukonakala kwengelosi (1971)
Yincwadi yokugqibela ye-tetralogy Ulwandle lokuchuma, uthotho apho uMishima evakalisa ukwala kwakhe utshintsho kunye nokungeniswa koluntu lwaseJapan. Iploti isethwe kwi-70s kwaye ilandela ibali lika ophambili kuye, umgwebi: Shigekuni Honda. Kufuneka kuqatshelwe ukuba umbhali wazisa lo msebenzi kumhleli wakhe kwangolo suku wagqiba ngalo ukuzibulala.
Ibali liqala xa uHonda edibana noTōru Yasunaga, inkedama eneminyaka eli-16 ubudala. Emva kokuswelekelwa ngumfazi, ijaji yazidibanisa noKeiko, athi kuye umnqweno wakhe wokwamkela uToru. Yena Ucinga ukuba kukuphindukuzalwa kwesithathu komhlobo wakhe ukususela ebuntwaneni Kiyoaki Matsugae. Okokugqibela ukhuthaza inkxaso yakhe kwaye umnika eyona mfundo inemfundo.
Emva kokujika i-18, uTōru ube ngumntu onengxaki kunye novukelo.. Isimo sakhe sengqondo simkhokelela ekubeni abonakalise ubutshaba kumhlohli wakhe, ade akwazi nokwenza i-Honda kwezonyango.
Kwiinyanga kamva, UKeiko uthatha isigqibo sokutyhilela lo mfana esona sizathu sokwamkelwa kwakhe, elumkisa ukuba ukuzalwa kwakhe ngokutsha wafa eneminyaka eyi-19. Kunyaka kamva, i-Honda esele ikhulile ityelela itempile yaseGesshū, apho iya kufumana isityhilelo esimangalisayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » I-Biography » Yukio mishima
Ubukumkani, inoveli entsha kaJo Nesbø. Uphononongo
Indlela ende egodukayo